Kufungisisa kweterevhizheni mushure mecanio-brain trauma | Kudzidziswa Kwekuziva
Iko kushandiswa kwemisangano iri kure, kuburikidza neinternet uye zvigadzirwa zvetekinoroji zvatiri nazvo nhasi, iri musoro watakatobata nawo nezve psychotherapy. Iyo emergency yakabatana neCOVID-19 yakamanikidza vazhinji vehutano hwehutano kuti vafungisise dzimwe nzira dzekushanda nemurwere kuti vatevedzere huwandu hutsva hwekuchengetedza hunodiwa. Imwe yedzimwe nzira modalities zvirokwazvo, mune iyo neuropsychological shamba, iyo tele.
Tisati tataura nezve emergency yakataurwa, kumwe kutsvakwa kwakange kwaitwa kuti vaongorore kushanda kwezvirongwa zvekugadzirisa zvakashandiswa kure, saka pasina kuvapo kwevashandi vehutano. Kuongororwa kwemabhuku esainzi pachinhu ichi, kwakaitwa muAustralia naBetts nevamwe vake muna 2018, akaedza kupfupisa mamiriro eunyanzvi pachinhu nekupfuura nepakati tsvagiridzo ine chekuita nekudzora neuropsychological kugadzirisa pane varwere vane cranio-encephalic trauma vane makore gumi nemasere nemakumi masere nemasere.
Chekutanga chiwanikwa chakaongororwa nenyanzvi ndechekuti kutsvagisa nyaya iripo mumasayenzi edzidziso kushoma uye kazhinji kune akakosha maitiro maitiro. Nekudaro, vanyori vanotenda kuti kune humbowo hwakakwana kuratidza izvo zvinotevera:
Kupindira kure kunogona inoshanda sekupindira kwevanhu.
Mhedzisiro inowanikwa mukugadzirisa kwe memory.
Panewo mhedzisiro yakanaka yekupindira kwepfungwa kudzikisira zviratidzo zvinoshungurudza.
Mhedzisiro yakakura kwazvo yakanyorwa muvarwere vane zvine mwero-yakaoma cranio-encephalic trauma.
Kuisa izvi zvirevo pamwe, vanyori vanopedzisa nezve nekubatsira kwemaitiro aya mune zviitiko pane zvinokanganisa maererano nekubatana kwemuviri-kwemurwere uye muvandudzi; ivo vanotaurawo kuti rudzi rwakadai rwekurapa runogona kuve rwunoshanda rwekugadziridzwa patsika, uye rwunogona zvakare kubatsira mukuderedza mitengo.
Nekudaro, maBet pamwe nevamwe, sekufungidzira, vanotaura zvakawanda zvisingabviri zvinobuda muongororo iripo nekutsanangura kuti parizvino zvakaoma kutsanangura ma paramita mazhinji akakwanirisa kuti rinyatsoita basa rekugadzirisa kureba, kunyanya nekuda kweiyo heterogeneity yekutsvagurudzwa kwakatariswa ongororo iyi yemabhuku. Zvimwezve zvidzidzo zvinofanirwa kuitirwa kuti unzwisise, semuenzaniso, izvo izvo mhando yakanaka yekutaura maererano zvinetso zvevarwerela kwakawanda frequency yemisangano yerunhare uye kwakakodzera nguva yemusangano wega wega.
Pasinei nezvose, zvinoita kunge zvichikwanisa kugumisa kuti kure neuropsychological kudzoreredza inzira yakajeka yekudzora matambudziko ayo anowanzoda isu kuti tisakwanisa kuona murwere uye nhasi isu tinazvo zvishandiso zvakawanda zviripo kune izvi, zvakare zvakasununguka. Pane ino saiti, mune yedu MutamboCenter (zvatiri kuitawo kuti isu tigone kuita mazviri Mutauro wechirungu), pane rakasiyana siyana re nemahara zviripo izvo zviuru zvevanhu zvinokwevera kubva zuva rega rega, kusanganisira vashandi vehutano, vabereki nevarwere pachavo.
Mapurogiramu emahara nemakadhi. Yedu GameCenter
Kukuvara kwemusoro uye kurohwa. Uchapupu-hwakavakirwa patsva
Betts, S., Feichter, L., Kleinig, Z., O'Connell-Debais, A., Thai, H., Wong, C., & Kumar, S. (2018). Telerehabilitation maringe neyakajairwa kutarisirwa yekuvandudza kugona kwekuita uye mhando yehupenyu hwevakuru vane kushungurudzika kwekukuvara kwehuropi: Kuongorora kwakarongeka. Internet Zvinyorwa zveAllied Health Sciences uye Kudzidzira, 16(3), 9.
kugadzirisa kure, tele, kukuvara kwemusoro
Kuziva tele-kugadzirisa mushure me cranio-encephalic trauma2020-04-072020-04-13http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/04/teleriabilitazione2.jpg200px200px